Booliska Hargeysa oo rasaas ku furay shacab - BBC Somali
Booliska Hargeysa oo rasaas ku furay shacab
Image caption Dadka dhaawacmay waxaa lagu daaweynayaa cisbitaalka magaalada Hargeysa
Rasaas ay boliisku ku rideen dad gadoodsan ee Magaalada Hargeysa waxaa ku dhintay wiil yar oo kow iyo toban sano jir ah, waxaana ku dhaawacmay afar qof oo kale oo mid ka mid ah uu yahay wiil 15 sano jir ah oo sheegay in isagoo baaskeel ku watay wadada ay xabaddu ka haleeshay lugta oo ay jebisay.
Dadkan rasaastu haleeshay maqribkii shalay ayaa waxay isku dhaceen boliiska oo yimid dhul laba dhinac ku muransanyihiin oo guri laga dhisayay.
Dadka dhaawaca ah oo BBC ku wareysatay cisbitaalka guud ee hargeysa waxay u sheegeen in wiilka yar ee dhintay ay xabad madaxa uga dhacday, laakiin inta kale waxaa ku yaallay dhaawac lugaha, faraha, iyo qoorta ah.
Waxay ku eedeeyeen boliiska inay si arxan darro ah ugu fureen rasaasta shacab aan hubeysneyn.
Wasiir xigeenka Amniga ee somaliland Cabdi Daahir Cammuud oo BBC-da la hadlay wuxuu qiray rasaasta boliisku ku fureen dadkan.
Laakiin Wasiirka wuxuu sheegay in dadku iyagu dhagxaan la dhaceen boliisku markii ay tageen dhulka muranku ka taagnaa kadibna - siduu hadalka u dhuigay- is difaaceen boliiska.
Rasaastan boliisku fureen ee wiilka yari ku dhintay ayaa aad looga hadal hayaa magaalada hargeysa, iyadoo la filayo in maanta la aaso wiilka yar.